Mampametra-panontaniana ny Maha-Ara-dalàna ny OTAN · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Febroary 2017 5:16 GMT
Ireo firenena mpikambana na mpiara miasa amin'ny OTAN, wikipédia. CC BY-SA 3.0
Raha nanamafy ny fanohanan'izy ireo ny Otan i Donald Trump sy i Angela Merkel, dia mitombo ny fihaikana ity Fiarahana ara-tafika amoron'i Atlantika ity.
Tsy milamina intsony ny OTAN (Fikambanan'ny Fifanarahan'ny Atlantika Avaratra). Notsikerain'i Donald Trump mafy andro vitsy monja mialoha ny fanokanana azy tao amin'ny Trano Fotsy, nahazo ny fankasitrahan'ny fanjakana Amerikana vetivety teo ny Fikambanana Transatlantika tamin'ny dingana voalohany ara-diplaomatika nataony. Taorian'ny fihaonana tamin'ny 27 Janoary, nanambara ny Praiministra Britanika Theresa May fa nanohana «100 % ny Otan » ny filoha Amerikana.
Fiovana nohamafisina ny ampitso nandritra ny resaka an-tariby teo amin'i Donald Trump sy i Angela Merkel, izay nampahatsiahy tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety mikasika ny “maha zava-dehibe indrindra amin'ny fisian'ny Otan ao anatin'ny fifandraisana transatlantika mivelatra kokoa sy ny anjara asany amin'ny fiantohana ny fandriampahalemana sy ny fitonian'ny fiarahamonintsika ao Atlantika Avaratra.” Porofon'izany ny fihafanan'ny fifandraisan'ny roa tonta, nilaza tamin'ny fanambarana iray ny filohan’ ny Etazonia fa handray ny Chancelier Alemàna ao Washington izy ary hamonjy ny Vovonan'ny G20 amin'ny Jolay ao Hambourg
Ny kianin'i Donald Trump amin'ny Otan
Nandrasana hiova taorian'ny fampielezan-kevitra tena mamelively, toa hita mazava fa nampitony ireo fanambarany teo aloha momba ny OTAN sy ny Vondrona Eoropeana i Donald Trump. Tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny gazetiboky Times sy Bild, tsikera kokoa ny kabary nataony. “Raha ny marina, [Ny Vondrona Eoropeana] dia fitaovan'i Alemaina. Izany no mahatonga ahy mihevitra fa tsara tamin'ny Fanjakana Mitambatra ny niala taminy, “hoy izy tamin'ny tapaky ny volana Janoary.
Mikasika ny OTAN, nosokajiany fa “lany andro” ity fikambanana ity noho ny tsy fahaizany miatrika ny fandrahonan'ny mpampihorohoro. Nalahelo ihany koa ny filoha Amerikana fa tsy nanefa ny 2% tamin'ny harin-karena faobeny tamin'ny 2014 ny mpikambana rehetra mba hamatsiana ny fandaniana ara-miaramila. “Tsy mandoa izay tokony naloany ireo mpikambana, kanefa mbola hiaro azy ireo ihany isika. Ataoko fa tena tsy rariny ho an'i Etazonia izany” hoy i Donald Trump.
Mizarazara ny hevitra ao Eoropa
Ny fivaonan'ny lahatenin'ny filoha Amerikana dia midika fitomboan'ny fihantsiana avy etsy sy eroa manoloana ilay fikambanana transatlantika. Raha 65%-n'ny Italiana sy ny Poloney no mihevitra fa mila ny fanohanan'i Etazonia sy OTAN ny Vondrona Eoropeana mba hiarovan-tena manoloana ny fandrahonana avy any ivelany, dia 54% monja amin'ny Britanika, Frantsay 53%, sy Amerikana 48% no miombon-kevitra amin'izany, araka ny fitsapan-kevitra notontosain'ny Ifop tamin'ny olona maherin'ny 7 000 tamin'ny volana Oktobra 2016.
Natsangana ny ampitson'ny Ady Lehibe Faharoa, vokatra avy amin'ny “ady mangatsiaka” tokony hanjavona miaraka amin'ny fanjavonan'io ady io ny Otan, araka ny filazan'i Filip Kovacevic, mpampianatra momba ny fifandraisana iraisampirenena ao amin'ny Oniversiten'i San Francisco.
Hahatonga ny tena fampihavanana eo amin'i Alemaina sy Rosia ho azo tanterahana izany, no sady miafara amin'ny politika marin-toerana sy ny fanambinana ara-toekarena maharitra ao Eoropa, hoy ilay manam-pahaizana. Miady mivantana ho amin'ny fandravana ny Otan ireo antoko mpandrendri-bahoaka miha-matanjaka hatrany ao Eoropa.
Araka ny heviny, dia manohana ny “dingana fanapotehana ny Otan izay efa nanomboka” ihany koa i Donald Trump.
Fisokafana mankany Atsinanana notoherina
Manoloana ny fisokafan'ny Fikambanana tsikelikely, izay efa 28 ankehitriny ny isan'ny mpikambana ao aminy, mankany amin'ireo firenena ao Eoropa Atsinananana, dia aleon'ny filoha Amerikana nanokana fandaniana bebe kokoa amin'ny fanamafisana ny tafikany manokana ao anatin'ny drafitra « fanarenana ara-miaramila goavana“. Tamin'ny faran'ny volana Janoary, nahemotry ny kongresy Amerikana faninefany ny fankatoavana ny arifenitra fidiran'i Montenegro ao amin'ny OTAN.
Raha navela hanatrika ny fivorian'ny fikambanana nanomboka tamin'ny 19 May 2016, dia tokony ho lasa mpikambana faha-29 ity firenena ao Balkana ity amin'izao taona 2017 izao raha ny tokony ny izy. Saingy toa niato ankehitriny ny fidirana nirin'ireo mpitondra ao Montenegro fatratra sy nampanantenaina ho fitaovana hidirana ao amin'ny Vondrona Eoropeana. Fa lasa tohan-kevitra miteraka resabe amin'ny fidirany ho mpikambana ny fisalasalana eo amin'ny ankamaroan'ny mponina, ny famelezana miverimberina atao amin'ny demaokrasia ary ny raharahan-kolikoly marobe maha voarohirohy ireo tompon'andraikitry ny antokon'ny maro an'isa.
Hatsiaka tampoka avy ao Torkia
Ny DPS tokoa no hany antoko ao Eoropa mbola eo amin'ny fitondrana hatramin'ny naharava ny Ampira Sovietika. Manana laza voaloton'ny raharaha maromaro tahaka ny raharaha telecom (fifandraisan-davitra), horonam-peo sy trafikan-tsigara miaraka amin'ny mafia Italiana ny filohany, filoha teo aloha sady praiminisitra ao Montenegro Milo Djukanovic.
Amin'ny ankamaroan'izy ireo, te hiditra ao amin'ny Vondrona Eoropeana tahaka ny nataon'ireo firenena miroborobo toa an'i Malta sy Aotrisy ny olom-pirenena, fa tsy ao amin'ny OTAN.
hoy i Marko Milacic, mpitarika ny hetsiky ny mpanohitra ao Montenegro. Mahakasika an'i Torkia, tafika lehibe faharoa ao amin'ny Fikambanana, ihany koa ny fahasemporana manodidina ny Otan, fa indro i Torkia miara-miasa bebe kokoa amin'i Rosia enim-bolana lasa izay. Nanasokajy an'i Otan ho “fikambanana mpampihorohoro […] mandrahona an'i Torkia” mihitsy i Samil Tayyar, solombavambahoaka ao amin'ny antokon'ny fitondrana (AKP). Hatramin'izao, tsy nisy manampahefana avy ao amin'ny AKP nanohitra izany famelezana henjana natao ny OTAN izany.